Maka ny tranokalanao amin'ny fikarohana | Martech Zone
Maka ny tranokalanao amin'ny fikarohana
Alarobia 10, 2011 Alakamisy Oktobra Oktobra 27, 2011 Douglas Karr
Izahay dia nanana ny fanamby sy fahafinaretana amin'ny fiaraha-miasa amin'ireo mpanjifa vitsivitsy amin'ny torohevitra haka ny tranonkalany iraisam-pirenena raha resaka SEO. Manana mpanjifa hafa koa izahay izay tsy te-hanana laharana iraisam-pirenena fa mahazo fifamoivoizana iraisam-pirenena taonina. Ny fahazoana motera fikarohana toa an'i Google hahatakatra ny tanjonao ho fananganana toerana na fanatontoloana dia tsy mora toy ny fametrahana ny firenena kendrena ao amin'ny Webmasters… mila asa bebe kokoa izany.
Voadio dia consultancy SEO iraisampirenena izay nokaramainay hiara-miasa amin'ny iray amin'ireo mpanjifanay ary nanome torohevitra tsara izy ireo izay nahafahanay niova ho valiny ho an'ny mpanjifanay 3. Distilled dia nanao a fampisehoana amin'ny famakafakana angona sasany amin'ny fakana iraisam-pirenena ny tranokalanao.
Ny sasany amin'ny fikarohana:
Faritra iraisam-pirenena avo lenta miasa tsara kokoa noho ny subdomain na subfolders. Noho izany, ohatra, raha te-ho any Italia ianao dia alao miaraka amin'ny .IT tld
Ny fandikan-teny amin'ny milina dia tsy mandaitra. Anontanio fotsiny ny iray amin'ireo mpanjifako izay nampiasa ilay teny member miaraka amin'ny fandikan-teny amin'ny milina rosiana… nahazo chuckles vitsivitsy sy fialantsiny betsaka izy.
manana adiresy eo an-toerana (Birao lavitra) ary ny nomeraon-telefaona amin'ny tranokala misy anao.
manana rohy ivelany amin'ny tranokala dia tsy mandaitra amin'ny ankapobeny.
manana rohy miditra ao an-toerana eo amin'ny tranonkala dia tsy zava-dehibe ihany koa… ny rohy miditra lehibe kokoa dia tsara noho ny eo an-toerana.
Hijery bebe kokoa famelabelarana avy amin'ny Hannah Smith. Hivoaka tsy ho ela ny angona avy amin'ny fanadihadiana nataon'i Distilled.
Tags: Fatra CP
Ao anatin'ny tetibola ara-barotra ve ny fampandrosoana?
Politika momba ny haino aman-jery sosialy any amin'ny toeram-piasana